Hyaluronic Acid6မျိုး ပါဝင်တဲ့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask New Skiin Whitening Selfie Face Mask မှာ ? Sodium Hyaluronate ? Sodium Hyaluronate Cross polymer ? Hyaluronic Acid ? Hydrolyzed Hyaluronic Acid ? Hydrolyzed sodium hyaluronate ? Sodium Acetylated Hyaluronate စတဲ့ Hyaluronic Acid ၆ မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုမိုပြည့်ဝတဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီနှင့် ရေဓါတ် ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေ တင်းရင်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အသားအရေကို ချောမွေ့ညီညာစေပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်